ကျိုက်ထီးရိုး အထမ်းသမားတို့ နှပ်ချတာ မခံရလေအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျိုက်ထီးရိုး အထမ်းသမားတို့ နှပ်ချတာ မခံရလေအောင်
ကျိုက်ထီးရိုး အထမ်းသမားတို့ နှပ်ချတာ မခံရလေအောင်
Posted by moonpoem on Jan 16, 2013 in Creative Writing, Local Guides, Travel | 14 comments
ကိုကာကိုလာ ၁ဘူးကို ၂ထောင် ရသေ့တောင်ထိသာ တော်တက်ကားစီးခွင့်ပြုတာမို
မမဆူးရေးတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့
ဖြစ်ရပ်ကလေးကို ဖောက်သည် ချပါရစေ ရွာသူရွာသားတို့ ရေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ က ကျွန်မတိုးရစ်ဂိုက်အနေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးကို သွားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် ကင်ပွန်းစခန်းကနေ
ရသေ့တောင်ထိသာ တော်တက်ကားစီးခွင့်ပြုတာမို့ ရသေ့တောင်မှာ ဆင်းခဲ့ကြတယ်။
ဧည့်သည်က အသက်ကြီးနေပေမယ့် ရသေ့တောင်ကနေ တောင်ပေါ်ထိ လမ်းလျှောက်တက်ချင်တယ်လို့ 
ဆိုလာပါတယ်။ ကျွန်မက သူ့ ကို နားချပါသေးတယ်။ ဒီက အထမ်းသမားတွေက ရသေ့တောင်ကနေစပြီး ငှားရင်သာ တစ်သောင်းနဲ့ လိုက်တာ။ လမ်းတ၀က်ရောက်မှ အရမ်းမောပန်းပြီး မတက်နိုင်တော့တဲ့သူဆိုရင် အကြပ်ကိုင်ပြီး၁၂၀၀၀နဲ့ဈေးခေါ်တော့တာ။ ဆစ်လို့ လည်း မရဘူးလေ။ မောနေတော့ အကြပ်ကိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ ပဲ သွားရတာပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကို သိထားလို့ သူ့ ကို နားချပေမယ့် သူက ကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ ပြောပြီး
လမ်းလျှောက်တက်ခဲ့ကြတယ်။ လူကြီးဆိုတော့လည်း မရတော့ ၃ကွေ့ လောက်တက်ပြီး အထမ်းငှားပါတော့တယ်။
အထမ်းသမားတွေဘ၀က သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို လူတစ်ယောက်ကို အလေးချိန်ကို ထမ်းပြီး မတ်စောက်တဲ့ တောင်ကို တက်ရတာ။ ဘယ်ဧည့်သည်မဆို ပြီးတာနဲ့ မုန့် ဖိုးထပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို ပဲ အခွင့်ကောင်းယူပုံက ဒီလို။
နည်းနည်း တက်ပြီး မောလို့ ဆိုကာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ၀င်လိုက်တယ်။ ကိုကာကိုလာ တစ်ယောက်တစ်ဘူးစီ ၀ယ်တိုက်ပါလို့ ဧည့်သည်ကို ပြောခိုင်းတယ်။ ကျွန်မက ကိုကာကိုလာဈေးမေးကြည့်တော့ ၁ဘူးကို ၂ထောင်တဲ့။
ရန်ကုန်မှာ တစ်ဘူး၅၀၀။ ခုနက ဆိုင်အထိ ၁ထောင်။ ဒီဆိုင်က ဈေးများနေတော့ သံသယတော့ အရှိသား။
ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်ကလည်း တိုက်လိုက်ပါဆိုတာနဲ့လေးဘူးဝယ်ပေးအပြီး ၄ယောက်သားက ရေအိုးစင်ကရေသောက်ပြီး အဲဒီ၎ဘူးကို ဆိုင်ရှင်ပြန်အပ်တယ်။
ဧည့်သည် ကွယ်ရာမှာ ၄ထောင်ကို ဆိုင်ရှင်ဆီကတောင်းလိုက်တယ်။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း ၄ထောင်လည်း ရ ၊ မသောက်ရသေးတဲ့ ဘူးတွေဆိုတော့ ပြန်ရောင်းလို့ ရ ကျွန်မတို့ အနှပ်ခံလိုက်ရတာပါ။
ဒီလိုလည်း တောင်ပေါ်လည်း ရောက်ရော ကျွန်တော်တို့ ကိုအထမ်းခ ၅ထောင်ပဲ ပေးလို့ ပြောတယ်။ အထမ်းခ ၁သောင်း၂ထောင်ပြောခဲ့တာ။ ၅ထောင်ပဲ တောင်းတော့ အံ့သြသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ၅ထောင်လည်း ပေးပြီးရောဒါက မုန့် ဖိုးဗျ။ အထမ်းက ၁သောင်း၂ထောင်ထပ်ပေးလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်မမှာ ပြောစရာ စကားမရှိတော့ပါဘူး။ ၁နှစ်ကို ကျိုက်ထီးရိုးအခေါက်ခေါက် အခါခါ ရောက်ပေမယ့် အတွေ့ အကြုံတွေကမကုန်နိုင်စရာပါပဲ။ အားလုံးလည်း အထမ်းစီးဖြစ်တဲ့အခါ ကျွန်မလို မဖြစ်စေဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အော်… ရယ်. ..
စကားမစပ် အဲ့သည့်လူတွေ စန္ဒာပြနေလေရဲ့ …
၁။ တန်ခူးလ … သင်္ကြန်ပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၂။ကဆုန်လ … ညောင်ရေသွန်းပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၃။နယုန်လ … စာပြန်ပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၄။၀ါဆိုလ … ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၅။၀ါခေါင်လ … စာရေးတံမဲပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၆။တော်သလင်းလ … လှေပြိုင်ပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၇။သီတင်းကျွတ်လ … မီးထွန်းပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၈။တန်ဆောင်မုန်းလ … ကထိန်ပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၉။နတ်တော်လ … စာဆိုပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၁၀။ပြာသိုလ … မြင်းခင်းသဘင်ပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၁၁။တပို့တွဲလ … ထမနဲပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
၁၂။တပေါင်းလ … သဲပုံစေတီပွဲ + ဆန္ဒပြပွဲ
နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာဆို နှာခေါင်းရှုံ့ကြအောင် လုပ်ရက်ပါပေ့
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ ပူပူနွေးနွေး၊ အေးအေးချမ်းချမ်း ကျိုက်ထီးရိုးရောက်သွားသူဆိုတော့…
ရသေ့တောင်ကနေ ရင်ပြင်တော်ပေါ်တက်တဲ့ ကားလမ်းက Safe မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ…
တောင်တက်ကားတွေ အင်ဂျင်ကအစ ကြံ့ခိုင်မှုအရမ်းကောင်းပေမယ့် လမ်းတည်ဆောက်မှုမှာ အတော်လေးညံ့ဖျဉ်းတာတော့ အားမရစရာတွေ့ရပါတယ်…
ကျွန်တော့စိတ်ထင် နိုင်ငံခြားသားတွေကို ရသေ့တောင်ကနေလှမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ တောင်တက်လမ်းရဲ့ ရသေ့တောင်ကနေ ရင်ပြင်တော်အထိ လမ်းရဲ့ Safety ကို တာဝန်မယူနိုင်လို့လို့ ထင်ပါတယ်… ဒါကတစ်ကြောင်း…
ဒီအထမ်းသမားတွေကို Management လုပ်ဖို့ အဖွဲ့တစ်ခုတော့လိုနေပြီထင်ကြောင်း…
လူတစ်ဦးအထမ်းအတွက် ဈေးဘယ်လောက်မူသေသတ်မှတ်ဈေး စနစ်တကျထားသင့်ပါတယ်…
အထုတ်အပိုးများ အထမ်းအတွက်လဲ အလေးချိန် Kg ဘယ်လောက်ကနေ ဘယ်လောက်အထိ ဘယ်ဈေးဆိုတာမျိုး သတ်မှတ်ထားပြီး ဈေးသတ်မှတ်ပေးထားသင့်ပါတယ်…
နောက်ထပ် Tips ပေးတာကတော့ တစ်မျိုးပေါ့… နောက်တစ်ခုက လမ်းမှာ အဲဒီလိုအပိုတောင်းတာ Cheat လုပ်တာမျိုးတွေရှိလာရင် Management ကိုတိုင်နိုင်တာမျိုး ထိရောက်စွာအရေးယူတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်… ဒါကတစ်ချက်…
အခု ကားလမ်းဖွင့်လိုက်တော့ အထမ်းသမားတွေရဲ့ ၀င်ငွေသိသိသာသာလျော့သွားတယ်…
နောက်တစ်ခုက လမ်းမှာ အရင်လိုဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်လေးတွေသိပ်မတွေ့တော့သလို… ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလဲ အရင်လိုလက်ရာမမြောက်တော့ဘူး…
အဲဒါ အင်အားရင်းပြီးလုပ်စားကြတဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ…
သူတို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘယ်လိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးကြမလဲ…
အဲဒီလို… ခေတ်မီပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးတဲ့အချိန်မှာ စနစ်တကျအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးမှုရှိဖို့ လိုပါတယ်…
ဒါတွေကို စဉ်းစားပြီးမှ Upgrade လုပ်ရပါလိမ့်မယ်…
မဟုတ်ရင်တော့ Chaos ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ…
ပညာမတတ်လို့… ခန္ဓာကိုယ်အင်အားကိုရင်းပြီး ရှာဖွေစားသောက်ကြတဲ့ဆင်းရဲသားလူတန်းစားကို အပြစ်ပြောမယ့်အစား အသိပညာကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားကြတဲ့ Management ရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကို ပိုပြီးအပြစ်တင်စေချင်ကြောင်း…
ကျိုက်ထီးရိုးကို အမှန်တကယ် Resource ဖြစ်အောင် ယခုထက်ပိုပြီးလုပ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်း…
ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ ဧည့်သည်တွေကို ရသေ့တောင်ထိပဲ ကားစီးခွင့်ပြုရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ရသေ့တောင်ကနေတောင်ထိပ်ထိ သွားတဲ့ လမ်းက safe မဖြစ်လို့ ပါ။ ကျွန်မ အသိ ဧည့်လမ်းညွှန်တုန်းကလည်း ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အထမ်းသမားတွေကို မကျေနပ်လို့ သူတို့ ကို ကိုင်တွယ်တဲ့ ကောင်တာကို သွားတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ ဂရုတစိုက်နဲ့ နားထောင်မပေးသလို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမယ့်လူလည်း မရှိခဲ့ပါတဲ့။ပြီးတော့ သူ့ တုန်းကဆို အထမ်းသမားတွေက ခင်ဗျားတိုင်ချင်ရာတိုင် ဘယ်သူ့ မှ မကြောက်ဘူးလို့ ပြောတာ ခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒီလို ပြောပုံ ဆိုပုံအရဆိုရင် မကြောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောတဲ့ အတိုင်း သူတို့ ကို တကယ် ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့် ခွဲ့ မယ့်လူ မရှိလို့ ပါပဲ။ ပြုပြင်နိုင်ကြပါစေ။
အဲဒီနား.. ဟိုဖက်တောင်.. ဒီဖက်တောင်တွေကြား.. ကြိုးပုခက်ကလေးနဲ့.. သွားတဲ့တာဝါတွေ..လိုင်းတွေဆွဲဖို့ကြံနေသူရှိနိုင်ကောင်းတယ်..
အခုဆန္ဒပြပွဲတွေ.. ဗရမ်းဗတာတွေကို အစိုးရဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလည်း.. စောင့်ကြည့်နေမယ်ထင်ပါကြောင်း…
အဲ့ဒီ ကြိုးပုခက် ပေါ်လာပါစေ ဆုတောင်းတယ် ။ တကယ့်ကို လှပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ခရီးတခု ဖြစ်သွားမှာ။
ခုတော့ ဘယ့်နှယ့်လုပ်ကြမယ် မသိဘူး ။ ဘကြီးစိန်လည်း သနားသေးတယ် ။
” ငါးတကာ ယိုတဲ့ချီး ပုဇွန်ဆိတ်ခေါင်း စု ”
အဲဒီက လူတွေဆိုရိုးသားမယ်လို့ ထင်တာ.. သူတို့လည်းမရိုးသားတော့ဘူးနော်…
မလိမ့်တပတ်နဲ့ လုပ်စားနေကြတာဘဲ… ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကို ပြန်ပြောပြပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်….ကျမတို့လည်းသတိထားရတာပေါ့….
တောသား လူလည်တွေပါလား.. ကြောက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ.. တော်တော် အကျင့်ပျက်နေကြတာပဲ.. ရတုန်း ရိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြီးက တော်တော် ဆိုးတယ်။
နိုင်ငံခြားသားမှမဟုတ်ပါဘူး မြန်မာအချင်းချင်းလည်း လည်ရင်လည်သလိုနှပ်ချနေကြတာတွေ အခုထိရှိပါသေးတယ်
moonpoemရေ … နေရာတိုင်းမှာ ဒီလို ဗလောင်းဗလဲ လုပ်ပြီးရှာစားချင်တဲ့ လူလိမ်တွေ ပေါပါတယ် .. ။ ဘယ်နည်းနဲ့ ဘယ်လို ကြုံရမယ်မှန်း မသိပေမယ့် … တစိမ်းတရံနဲ့ အလုပ်သဘောအရ ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ ချည်ပြီး တုပ်ပြီး ပြောမှကို ဖြစ်မှာပါ ။ ကျိုက်ထီးရိုးသွားတိုင်း …. အထမ်းသည်တွေကိုမြင်လျှင် … ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်စားရတာပဲလို့တွေးပြီး အလိုလို သနားစိတ်ဝင်နေတာ .. ခုလိုကြတော့ …. အတော်ဆိုးတာပဲ … ။
တောင်တက်ကားစီးရတာ လုံးဝကို အဆင်မပြေလို့ ကျိုက်ထီးရိုးကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ရောက်ပြီး ကတည်းက .. .. ထပ်မသွားချင်တော့ဘူး … ။ ရောက်ဖူးတာလည်း လေးငါးခေါက်ရှိပြီဆိုတော့ … လူကြပ်ကြပ်နဲ့ တိုးဝှေ့ နေရတာကိုက ..စိတ်အိုက်စရာလေ … ။
အခုမှ မွန်းကဗျာလေးက တိုးဂိုက်လုပ်မှန်းသိရသကွဲ့ 
အဲဒါ လမ်းမှ အနှပ်မခံရအောင် မွန်းကဗျာလေး ၊ လိုက်ပို့ ပေးနိုင်မလားကွဲ့ 
ဒီနှစ် သွားမလို့ ခု ကျိုက်ထီးရိုး ပို့(စ) တွေ လိုက်ဖတ် လိုက်မှတ်နေတယ်။
မျှပေးတဲ့ အသိလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျိုက်ထီးရိုးတော့ ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး…ကုသိုလ်မရ ငရဲပဲ ရခဲ့တယ်…ဂေါပကဆိုလဲ ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီး ဓမြတိုက်နေသလားအောက်မေ့ရတယ်…ဘုရားသေးသေးလေးတွေအများကြီးဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး မဖူးဖြစ်တဲ့အခါ ဂေါပကက ဘာလှမ်းအော်သလဲ ဆိုတော့ ဘုရားဆိုတာ ဖူးကောင်းတယ်နော့တဲ့…ဖူးမိပြန်ရင်လဲ ဇွတ် အလှုခံ…တောင်တက်ကားသမားတွေကလဲ တအားရိုင်း…ပြောတော့ပါဘူး…